I-Semalt: Iyini Spam Yokugawula? Indlela Yokuzivimbela Ngama-Three Simple Njengoba ABC Izinyathelo
Sisebenzisa i-Google Analytics ukuqapha ithrekhi yethu yesayithi futhi sibuthe idatha mayelana nokuvakashelwa nokushaya. Okwamanje, kubalulekile ukuthola ulwazi oluthe xaxa mayelana nabakwa-spammers kanye ne-bots kanye nezindlela ezithinta amasayithi ethu. Abaqaphi nabagaxekile bahlose ukukhohlisa idatha yethu ye-Google Analytics ngezinhloso zomuntu siqu. Bathumela i-bots nezinto ezinonya kumasayithi ethu, ngaleyo ndlela kusivimbela ukuba sithole izikhundla ezinhle zokusesha injini.
Ivan Konovalov, i- Semalt uMenenja Wokuphumelela Kwamakhasimende, uchaza ukuthi kunezinhlobo ezimbili ezinkulu zokudluliselwa kogaxekile: umgwaqo ogaxekile nogaxekile. Ugaxekile we-ghost uhlale ekwazi ukukhohlisa i-akhawunti ye-Google Analytics ekungeneni ukuvakashelwa okungalungile ngisho nalapho amabhubhu engakaze avakashele iwebhusayithi yakho. Ngakolunye uhlangothi, umgwaqo we-crawler uvakashela iwebhusayithi yakho, kodwa kunzima ukukhomba ukuthi ngabe ubhekene nokuqukethwe kwakho kuwebhu noma cha ngoba izinga lokunciphisa lihlale lingu-100%.
Kuyini umgaxekile ogaxekile?
Ngalesi sikhathi, sithemba ukuthi usithuthukise ulwazi lwakho mayelana nokuthunyelwa kogaxekile futhi ulungele ukuba nokuqonda kogaxekile. Ugaxekile we-crawler uvakashela ibhulogi yakho noma iwebhu kepha akanakho ukuxhumana nokuqukethwe kwakho noma ama-athikili. Lolu hlobo logaxekile luvame kakhulu kune-spam yofuzo ngoba alithathi izinsiza eziningi zokwakha abakwa-crawlers. Eqinisweni, i-intanethi igcwele ugaxekile ogaxekile futhi uvame ukusetshenziswa yi-Google, i-Bing, ne-Yahoo ukukhomba inombolo enkulu yamasayithi. Inhloso yokweqa ugaxekile ukuheha abantu ukuthi bathenge imikhiqizo evela kuzixhumanisi ezihambisanayo. Abakwa-Spammers nabaduni baqhubeka besakaza amabhugi abagaxekile ku-inthanethi futhi bazama ukuthola izixhumanisi babuye kumawebhusayithi abo. Ngaphezu kwalokho, basebenzisa ugaxekile ogaxekile ukukhipha isayithi lakho kumiphumela yokusesha injini.
Ungavimbela kanjani ugaxekile ogaxekile ngezinyathelo ezintathu ezilula?
Njengoba ugaxekile ogwazayo empeleni ufinyelela kuwebhusayithi yakho, ama-hostnames abukeka evumelekile futhi athembekile..Ngeshwa, ngeke kubonakale njengogaxekile we-ghost futhi kunalokho kwandisa izinga lakho lokunciphisa. Ugaxekile wokugawula ubonisa ama-hostname afanelekile futhi azihlukanisa ngokwawo njengokuvakashelwa okuvumelekile, kodwa akwenzi lutho ngobuqiniso. Yingakho ukuvinjelwa kogaxekile okwenzela umgwaqo kuyimfuneko edingekayo uma ufuna ukuqinisekisa ukuphepha nokuvikelwa kwesayithi lakho.
Isinyathelo 1: Thola zonke izizinda ezigaxekile namagama wewebhusayithi:
Ukuthola zonke izizinda ze-spam namasayithi, kufanele ungene kuma-akhawunti we-Google Analytics uphinde ulandele lezi zinyathelo ezilula:
1. Ehlangothini lwesobunxele, kufanele uhambe ngokuya kukhetho lokuthola;
2. Khetha konke okukhethwa kukho kwe-Traffic bese uya inkinobho Yokudlulisa;
3. Endaweni eyinhloko ye-akhawunti ye-Google Analytics, kufanele uchofoze inketho yegama le-Hostname ukukhomba umgaxekile wogaxekile;
Kusuka lapha, ungabona uma umgaxekile ogaxekile ekuthumelela ukuhambela okufakiwe noma cha.
Isinyathelo 2: Dala izinkulumo ezijwayelekile:
Uma usuqaphele ugaxekile logaxekile, isinyathelo esilandelayo ukudala izinkulumo ezijwayelekile ngendlela elandelayo:
i-traffic2cash \_ .xyz | darodar \_ .com | izinkinobho-ye-website \_ .com
Singathanda ukukuncoma ukuthi uyibeke kanye ne-Notepad ne-TextEdit, ngakho uzobuyela ekhasini eliyinhloko. Awudingi ukuhlela inkulumo nge '|' - bhalisa njengoba kuzomisa izinkulumo ukuze zenze imisebenzi yazo.
Isinyathelo sesi-3: Setha isihlungi esijwayelekile futhi ungabandakanyi izizinda zogaxekile namagama wewebhusayithi:
Isinyathelo sesithathu nesokugcina ukusetha izihlungi zangokwezifiso futhi ungafaki zonke izizinda ezigaxekile zogaxekile. Kulokhu, kufanele ukhumbule izinyathelo ezilandelayo:
1. Yiya kuphaneli yokuphatha ye-akhawunti yakho ye-Google Analytics.
2. Kwimenyu ephezulu, chofoza inkinobho Yonke Yehlungi bese ukhetha lokho okukhethwa kukho okufakwe kowokufaka okubomvu.
3. Uma isihlungi sidalwa, kufanele ungeze amagama wesizinda asolisayo kuwo futhi ungakhohlwa ukuqinisekisa izihlungi ukuqinisekisa ukuthi zonke izinkinga zihanjisiwe.